SDA, vingkwọ ụgbọala | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Usoro okporo ụzọ, Ịkwọ ụgbọala
Kụzie otu ihe eji eme ka ị daba n'usoro ọrụ +
Kụzie otu ihe ị ga-esi mee ka ọ dabara na ntinye ngwaọrụ. + Cheta, ọkpụkpụ a na-ewere ọnọdụ na nke abụọ. (ọ dịkarịrị na nke atọ, ma ọ bụrụ na oge dị nfe). Iji breeki ma gbanwee gaa na nke abụọ dị mkpa ruo ...
Kedu ihe na-agagharị, gịnị ka ọ bụ?
Kedu ihe na-agagharị, gịnị ka ọ bụ? Gbanwee. Nke a pụtara na azụ na n'ihu ka isi wee daa .... ụzọ mbụ. emeso onye ọzọ oburu na odi, nke a bu n'azu ...
Nkwekọrịta n'etiti tiketi Gịnị bụ ala tiketi?
Esemokwu n'etiti tiketi ndị dara na tiketi bụ? Darling, na eserese a na-ajụ ajụjụ a 8-13 ihe ngosi PRESCRIBING "Iwu kwụ ọtọ" (iwu okporo ụzọ nke Russian Federation, Ihe Odide 1. Ihe ịrịba ama okporo ụzọ. Mana na…
Banyere breeki na ntinye akwụkwọ ntuziaka ...
Banyere breeki nke a Write dee ihe niile nke ọma…
Ogosi ebe nke ịgba ịgba !!!
Ogosi ebe nke ịgba ịgba !!! Mgbochi ahụ dị irè ka ọ dị nso n'etiti njikọta MARKED, nakwa na Nzube na ntụgharị (ọbụna na-enweghị ihe ịrịba ama). Ihe nke abuo kwesiri ibu ihe ngba ama mgbe ...
Ndi “yaadi” uzo eji abanye uzo dika iwu nke uzo si di? Ndi “yaadi” uzo eji abanye uzo dika iwu nke uzo si di?
Ndi “yaadi” uzo eji abanye uzo dika iwu nke uzo si di? Ndi “yaadi” uzo eji abanye uzo dika iwu nke uzo si di? Ee e. Yards, dị ka paragraf 1.2 iwu okporo ụzọ - nke a bụ mpaghara dị n'akụkụ. Agbanyeghi na enwere…
Ịjụ ndị ọrụ mmanye, ị nwere ike ịgwa onye ọrụ DPS ka ọ kwụsị ụgbọ ala n'enweghị ihe mere, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ ndekọ
Ajụjụ ndị a hụrụ n'anya, ị nwere ike ịgwa onye uweojii na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè ka ọ kwụsị ụgbọ ala n'enweghị ihe kpatara ya, dịka ọmụmaatụ, iji lelee akwụkwọ ndị a ga - eme ma ọ bụrụ na arụchaa ọrụ ahụ n'enweghị ihe kpatara ya ma ọ bụghị ...
a na-atụle ọtụtụ ụdị ụgbọala ahụ mgbe a na-ebu ibu ahụ? ma ọ bụ?
a na-atụle ọtụtụ ụdị ụgbọala ahụ mgbe a na-ebu ibu ahụ? ma ọ bụ? Nkume kachasị kwekọrọ ekwekọ. Nkịtị kachasị mma nke uka nke ụgbọ ahụ nwere ike iji ebu ibu, ọkwọ ụgbọala na ndị njem, dị ka onye nrụpụta kpebiri na ...
gị echiche: ihe dị mma akpaka ma ọ bụ ntuziaka nnyefe ???
n'echiche gị: kedu nke ka mma ma ọ bụ ntuziaka nnyefe ??? Ọ bụrụ na ejiri igbe ngwa ngwa akpaghị aka kwụ ọtọ, yabụ enweghị ike ịdolite ya, enwere ike ịkpọ ụgbọ ala tow, maka na ọ dabara adaba na nsogbu okporo ụzọ - gas - ...
Kọwaa na-ewu ewu gịnị bụ "okporo ụzọ '?
Kọwaa na-ewu ewu gịnị bụ "okporo ụzọ '? ụgbọ elu teknụzụ dị iche iche na mpaghara nke ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, wdg ... n’ozuzu, okporo ụzọ, okporo ụzọ n’ime mpaghara ebe amachibidoro ntinye nke ndị… ndị ọzọ nwere ike ime ya ebe…
Ọ nwere ike ịgafe n'okporo ụzọ? N'ọnọdụ ndị dị aṅaa, nke ọ na-agaghị ekwe omume?
Ọ ga-ekwe omume iru ebe ị na-abanye ụzọ gafere? N'ọnọdụ dị a isaa ka ọ ga-ekwe omume, nke na-agaghị ekwe omume? dịka iwu ọhụụ si kwe omume iru na dika iwu ọhụụ si di, ọ gaghi ekwe omume. Inwe ije ije nwere ike imere aka - ndu. ya bu, ihe ndi mbu kwuru ...
kọwaa ihe ịrịba ama na ịchịisi
kọwaa akara a na iwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe nzuzo, azụrụ ikike? Ọ bụrụ na ọcha na acha anụnụ anụnụ - ịgba ọsọ ọsọ ruo 60 km / hIf ojii na ọcha - ruo 80 km / h Ọ dị iche n'ụdị ...
Ajụjụ dị na p. Usoro 2.1.1 RF okporo ụzọ
Ajụjụ dị na p. Iwu 2.1.1 RF okporo ụzọ Ị gafere maka nnyocha na gị, iwu OSAGO, akwụkwọ ndebanye na ụgbọala. 2.1.1. Ibu na ha na mgbe ndị uweojii na-arịọ ha ka ha kwenye: ikikere onye ọkwọ ụgbọala ...
Ọ bụrụ na ọsọ ọsọ mepụtara na igwefoto, olee ngwa ngwa ugwo ahụ gosipụtara na nchekwa data na ebe nrụọrụ weebụ ndị uwe ojii?
Ọ bụrụ na enwere igwefoto ọsọ na igwefoto, kedu ka ịdị mma ahụ si pụta ngwa ngwa na ebe nchekwa data na ebe nrụọrụ weebụ ndị uwe ojii? ndị ahụ bụ igwefoto na-anọ ọdụ adọgara n'akụkụ àkwà mmiri, amaokwu, okporo osisi - ọkwa na-esite na ụbọchị 3-10, na ...
Ọ nwere ike ịnya igwe elekere anọ na ụzọ okporo ụzọ ọha?
Ọ nwere ike ịnya igwe elekere anọ na ụzọ okporo ụzọ ọha? Gụọ SDA na ntuziaka ntụziaka, edere ihe niile n'ebe ahụ. ma ọ bụrụ na ọ kwadebere ya na ngwa ọrụ ọkụ dị mkpa dịka nsụgharị ntụgharị, wdg, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume, ...
kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị kwụghị ụgwọ n'oge?
kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị kwụghị ụgwọ n'oge? N'afọ gara aga, di m mere. O (n'amaghi ebe ahu) wee ghọọ okporo uzo o bula, ebe nwuru anwu n'okwu ura, mita ...
12,5 nke 3,1 na-akwado. Ụbọchị 15 maka mmebi nke abụọ. Ọ bụ eziokwu? biko tụlee iwu
12,5 nke 3,1 na-akwado. Ụbọchị 15 maka mmebi nke abụọ. Ọ bụ eziokwu? M na-ajụ ka ị na-ezo aka n'iwu Nkeji edemede 12.5. Njikwa ụgbọ ahụ n'ihu malfunctions ma ọ bụ ọnọdụ nke ọrụ nke njem ...
afọ ole ka ị ga-ebugharị na US ???
afọ ole ka ị ga-ebugharị na US ??? Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị America ọ bụla nwere ikike karịrị afọ 16. A na-edozi ikike dị iche iche site n'aka ụlọọrụ ndị ọrụ nchịkwa pụrụ iche Bureau of Motor Vehicles (BMV), nke nwere ...
gbanwee ntụgharị njikọ
gbanwee na ntanetị a na-enweghị ike Naanị site na etiti, ebe ọ bụ na ntụgharị ahụ dịka ntụgharị, ma n'ogo dị elu, ị gaghị agbanye aka ekpe ma ọ bụrụ na ịgaghị etiti.
GKU "CBDDMO". Gịnị bụ nzukọ a na gịnị ka ọ na-eme?
GKU "CBDDMO". Gịnị bụ nzukọ a na gịnị ka ọ na-eme? Inwere ike ịgụ iwu a, na iwepụta ụlọ ọrụ gọọmentị etiti na-ahụ maka nchekwa na mpaghara Mịnịstrị Mịnịsta nke Moscow na Mkpokọta: 15.03.2012 10: 01
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,371.